Isilandi sevidiyo seVidiget - ukulanda okulula kusuka ku-youtube, instagram, facebook, twitter naku ...
Namathisela ikheli lakho lekhasi levidiyo bese uchofoza inkinobho yokulanda.Ikhasi levidiyo lingaba ikheli lekhasi le-youtube video, i-instagram post, i-facebook post, i-twitter post.
Ungayilanda kanjani ividiyo?
Ukulanda ividiyo ye-youtube, ividiyo ye-instagram, ividiyo ye-facebook, ividiyo ye-twitter
kufanele wenze izinyathelo ezingezansi.
Kopisha i-url yekhasi lakho levidiyo kusuka kuwebhusayithi yomthombo (i-youtube, i-instagram, i-facebook, i-twitter) ofuna ukuyilanda Ungasebenzisa i-Ctrl + C kubha yekheli lesiphequluli sakho noma ukopishe kwimenyu yokuqukethwe.
Namathisela i-url yakho yevidiyo kunkambu yekheli levidiyo bese uchofoza inkinobho yokulanda. Unganamathisela i-url nge-Ctrl + C noma ubambe enkundleni bese uchofoza kunketho yokunamathisela.
I-Vidiget iyi-downloader yevidiyo eku-inthanethi ekusiza ukuthi ulande kalula futhi ulondoloze amavidiyo wakho we-youtube.I-Vidiget ibuye isekele amanye amawebhusayithi afana ne-instagram, facebook, twitter. Uma uthumela ividiyo ukuze uyilande i-vidiget lungiselela uhlu lwezimfanelo zevidiyo lapho ungakhetha khona ikhwalithi oyithandayo futhi ungalanda ividiyo njengefayela le-mp3.
Uma ufuna ukulanda uhlu lwadlalwayo lwe-youtube nje faka ikheli lohlu lwadlalwayo (i-URL) enkambini yekheli levidiyo bese uqhafaza ukulanda inkinobho.ikheli lohlu lokudlala lingathanda "https://www.youtube.com/playlist?list=PLb3hUyKV2PcptH5jNHM1uhwHMdh5JKt1f"
Vidiget support instagram amavidiyo we-igtv.ngokulanda i-vidiget instagram ungalanda kalula futhi ulondoloze uhlelo lokusebenza lwe-instagram igtv's.in instagram chofoza kumenyu yokuqukethwe bese ushaya inketho ethi 'Kopisha Isixhumanisi' bese ubuyela lapha bese unamathisela ikheli kunkundla yokulanda bese uqhafaza I-buttun.
UVidiget uphinde asekele okuthunyelwe kwe-instagram (Izithombe). ngokufaka i-url yeposi (noma isixhumanisi seposi) kunkambu yokulanda ungalanda isithombe sakho.
Kungani usebenzisa i-vidiget
kwesinye isikhathi udinga ukugcina ividiyo kudivayisi yakho ukuze uyibuke ungaxhunyiwe ku-inthanethi. amanethiwekhi wezokuxhumana awavumeli abasebenzisi ukulanda amavidiyo.vidiget iyindlela engcono kakhulu futhi yamahhala yokulanda ividiyo kumanethiwekhi omphakathi athandwa kakhulu.nge-vidiget ungalanda ividiyo kusuka ku-youtube, instagram, facebook, twitter, vimeo, tumblr, twitch, dailymotion .